Cadawgii Tigreega oo uu gabalkiisii sii dhacayo iyo dhagarihii u danbeeyay ee uu ka fulinayo Soomaaliya - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Cadawgii Tigreega oo uu gabalkiisii sii dhacayo iyo dhagarihii u danbeeyay ee uu ka fulinayo Soomaaliya
July 8, 2018 | Filed under: MAQAALLADA | Posted by: Caasimada Online
Burburkii dawladnimo ee dalkeena ka dhacay 1991, ee sababay in ay dhacdo maqnaansho dawladeed,taasoo qarankay ku dhacdaa galo fawdo iyo burbur iyo xasilooni daro joogta ah. ayaa keentay in dalkeenii noqdo mid aan lahayn dawlad ilaalisa xuduudihiisa,bad iyo bari iyo cirba. waxaa lumay oo burburay hay adihii dawliga ahaa oo dhan,sharcigii iyo kala danbayntii.meel laciir sado iyo cid loo dacwoodo iyo cid masuul ah ayaa lawaayay.
Arimahani waxay sababeen in dalkeenii uu is dhibyar uuga faa iidaysto cadawgeenii shisheeye oo kaa shanaya dad soomaaliyeed oo ah dawladiid daba dhilif ah oo ka xun cadawga shisheeye. Maxaa yeelay cadawga shisheeye waa la fahmi karaa oo dadka iyo dalka malaha waa horar gumaysi doon ah,laakiin ninkii u dhashay dalka oo ah soomaali hadana doonaya in dalkaan lagumaysto oo lawaayo jiritaan iyo magac soomaaliyeed,oo dhaaf sanaya dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba shiliman kani waa kaxun yahay cadawgaa shisheeye oo kuu soo bareeray.
Waxaa sideedaba daliil kuugu ah kitaabkeena iyo diinteenu siday inoo cadaysay oo allahaah yiri kaafirka iyo munaafaqa waxaa cadaabta xataa kolkii lagaliyo meesha u hoosaysa la dhigaa MUNAAFAQA. ninka dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena khiyaamaa oo inooga baxaa arintaa inaga dhaxaysaa waa MUNAAFAQ gaalkaa dhaama waxbadan.
Hadaba cadawgii shisheeye ee inagu soo qamaamay,kolkay arkeen in aan dawladeenii inagoo soomaali ah iska duminay,oo wiilasheenii iyo dadkeenii dalka difaaci lahaa xasuuqnay,oo dayacanay kuwa markiiba inoo yimid waxaa u horeeyay TIGREEGII aynu shalay markaynu dawlada ahayn abaal u galay. hayeeshee noqday kuwa uugu cadawsan taariikhda wax la soo darsa umada soomaaliyeed oo uga yimaada dhanka ethiopia.
Tigreega oo lashaqaysanaya dawlado shisheeye oo reer galbeed ah iyo kuwo carab ah oo intuba yihiin xulufo,ayaa haystay qandaraaska ah dhismaha urur cadaw ah oo loo soo galiyay shaadh xarako diineed in ay yihiin oo iska dhigaya in ay dalka diin ku xukumayaan.kuwan oo gobolada waqooyi laga soo galiyay dalka soomaaliya oo la keenay koonfur.kama sheekayn karo halaaga ay u gayseen dadkeenii iyo dalkeenii.
Waligaa xasuusnoow,dawlad xumi oo dikteeytar ah ayaa ka khayr badan maqnaansho dawladeed oo ah in meeshaba ay kabaxdo dawladnimadu.Halkan waxaad ka garanaysaa qiimaha iyo sida ay lagama maarmaan u tahay DAWLADNIMADU.dhibka waxa inabaday wax kale maha waa dawlad la aanta.garo markaa macaanka iyo karaamada ay leedahay dawladnimadu iyo in aadamuhu noolaaan karayn dawlad la aan,yeelanaynina sharaf dadnimo iyo xornimo midna.
Tigreegii cadawga ahaa wuxuu ku yeeshay caasimadeenii,kooxo dawlad diid ah iyo siyaasiyiin daba dhilif ah,waxa uu la wareegay ciidankii sirdoonka soomaaliya oo gacan ku dhigay,waxa uu kala qaybiyay beelihii.wuxuu taageeraa dawladiid shabaab iyo cadawga soomaaliyeed si aan dawlad u dhalan.
SOOMAALILAND waxa uu ka dhigtay xoruntiisa uugu wayn ee uu ka dumiyo soomaaliya,waxa uu garab istaagay daba dhilifyadii soomaaray ee uugu khidmaynaayay,in dadka soomaaliyeed lakala gooyo lagana hor istaago in ay dawlad noqdaan helaan nolal iyo nabad iyo karaamo dawladnimo. beelaha waqooyi dhexdooda wuu kala dilay oo waxaa la caburiyay dadka raba dawladnimo iyo soomaalinimo,loogamana adkaan beel ahaan ee waxaa loo adeegsaday kaarayaal iyo ciidamo tigree ah. qofkii soomaalinimo laga maqlaa waa laxiri jiray beeshiisa kama daba iman karto waayo waxaa hortaagan tigree garab siinaya beelaha uu u dhiibay xukunka faasidka ah ee aan xaqa ku imaan ahayna.
TIGREE OO LIBAAX KUSOO BAXAY
Aduunkaan illaah ayaa maamusha,nin kii dulmi iyo kibir ku fogaadana waa laqaban.nimankii dalkeena iyo ethiopia shucuubteedaba gumaadaayay ee kala qaybinaayay maanta indho qurxoon kama muuqdaan.inagu marnaba isuma dhiibayno ehtiopia isbadalkasta oo dhaca,waayo waxaa ina dhexyaal arin aad ufog oo u baahan in labada dhinac ehtiopia iyo soomaaliya is hor fariistaan oo bud dhigaan heshiis ku salaysan xaqa,taasoo keenaysa in labada dalba helaan is amaan buuxa nabad iyo nolol sidaa hada ka dhacday eretariya iyo ethiopia.
Inagoo taa maanka ku hayna ayaan hadana soo dhawaynaynaa isbadalka dhacay ee badalaaya talo xumadii tigreega.waxaan durba aragnaa in culaysku yimid TIGREEGII oo ay kabaxeen meelihii ay haysteen dalka soomaaliya,iyo ismaamulka soomaalidaba. maamulka hargaysa iyo somaaliland tigreegaa buun buunin jiray oo u adeegsan jiray soomaaliya in aan dawladi ka dhalan. hada sidii hore maha,beelaha halkaa wada dagan waa is yaqaaniin waana heshiinayaan dhabtii ayaa timid ileen majiro tigreegii laysu soo kaxaysan jiray ee.
Tigreegii ismaamulka soomaalida waa ka baxay oo cabdi ilay hada nin soomaali ah oo caadi ah ayuu noqday waayo majiro ninkii uu dadka usoo kaxaysan jiray ee soo diri jiray.markaa daadkaa qaaday noocyadan oo dhan.
Mogdisho ciidamadii uu tigreegu samaystay,waa sii gabaabsi,siyaasiyiintii u shaqaynaysay tigreega intii qaylinaysay ee dhagarta waday iyo intii aamusnayd waa garab la aan maanta oo meel ay kubaxsan karaan ayaan jirin.fool xumadaas ayuu ku danbeeyaa ninkii khiyaama dalkiisa ee shisheeye raacaa.
shabaabkii iyo nimankii afka duubnaa malaha meel ay ka helaan hub,iyo dhaqaale waayo TIGREEGII waa baxay.hada waa naf la caari oo dhagarihii u danbeeyay ayay wadaan waana jabeen mana jirayaanba. waxa hada ka dhacaya caasimadeena ee ismiidaaminta ah waa dabar gu iyii iyo dhamaadkii shabaab iyo dawladiid iyo daba dhilif TIGREE inagu dhex hayay weeye. waxaa guusha leh wadaniga soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee raba dawladnimada nidaamka iyo kala danbaynta. waxaa guusha leh dawladeena soomaaliyeed ee qiimaha badan.
TIGREE waa jabay daba dhilifkii uu ku lahaa soomaaliyana wuu jabay. soomaalina waa guulaysatay,dawladeenuna waa dhaqaaqday dadkeenuna waa baraarugay oo gartay cadawgiisa. xaragada QALBI DHAGAX waxay muujinaysaa guusha dawlada soomaaliyeed iyo jabaka TIGREEGA.
Shacabka soomaaliyeed waa in ay u kacaan in la ugaarsado la dabar gooyo kuwii u shaqaynaayay TIGREEGA. waa in la far fiiqaa lasoo sheegaa la tilmaamaa,daba dhilifka rufyaanka ahaa si loo tirtiro.maha in aan ka reebno mid kamid ah kuwaas.siyaasiyiinta u adeegaya gumasystaha waa in sharciga lamariyaa.dalkeena waa lagalay markaa waa in aan iska qaadnaa heer yada guumaysiga. si aan gumaysiga isaga celino waa in aan tirtiraa kuwa raacsan waayo diintaa qabta sidan in munaafaqa horta la sugo. dhalin yarada soomaaliyeed waa in ay qotaan ciidamada oo u dhintaan dalkooda.
Walaalayaal soomaaliyeey dal iyo dibadba aan u huro nafteena dalkeena difaaciisa aan xajisano dawladnimadeena aan la dagaalano qabyaalada cadawgeenu inooga faa iidaysto aan qirano soomaalinimadeena kuna kalsoonaano waxkalana iska tuuro.dalka inagaa leh aan ilaashano sideen u ilaalinaynaa? waxaan u illaalinaynaa DAWLADNIMO ayaan xajisanaynaa oo adkaysanaynaa,dawladnimo ayaa dal lagu illaashadaa.
Waxaan xusayaa sidoo kale in Tigreegu isticmaalay oo dadku yeeshay PUNTLAND iyo JUBALAND iyo KOONFUR GALBEED iyo GALMUDUG iyo HIRSHABEELE haba ku kala xooganaadeen ee. tan macnaheedu waxaa weeye Tigreegu meela inooma dhaafin si xun buu inoo kala qaybiyay dadkeeniina u isticmaalay. marka waxaan rabnaa in aan xorawno waxaynu nahay kuligeen soomaali isku diin isku dad isku dal isku diir isku isir laynama kala qaybin karin laynama guumaysan karo hadaynu fahano wadaniyada iyo soomaalinimada. dad wanaagsan weeye soomaali laakiin waa caasinay dalkii iyo diinteenii iyo soomaalinimadii war aan is daba qabano waxba makala nihin ee walaalayaal.